नारी स्वतन्त्रता र पोशाक |
नारी स्वतन्त्रता र पोशाक
प्रकाशित मिति :2017-03-27 14:29:31
पहिरन लगाउने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि कुनै बस्तुको विज्ञापनका लागि नारीलाई बस्तुको रूपमा प्रदर्शन गर्नु पक्कै पनि नारी स्वतन्त्रता होइन । त्यसैले महिलालाई मदिरासँग जोडेर तथा कामुक बस्तुको रूपमा प्रचार प्रसार गरी विज्ञापन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
आजभोली दैनिक जस्तो विभिन्न अनलाइन समाचारहरुमा महिला कलाकारले लागाएका पोशाकको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु देख्दा दिक्क लाग्न थालेको छ । नारी स्वतन्त्रताको नाममा नारीहरू नाङ्गिए भनी आरोप लगाउदा निकै दुख लाग्दछ ।
हुन त नारीलाई नङ्ग्याउनु न बौद्धिकता हो, न त उसले लगाएको कपडाको लम्बाईसंग उसको चरित्रलाई नाप्नु नै सभ्यता हो । यो एउटा पाखण्डवाद हो । जुन हामी नेपाली सबैमा छ । यस वादले जुनसुकै जातजातिका महिला पुरुष तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई समेटेको छ । जहाँ नाङ्गो माानसिकता भएका बौद्धिक व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ नारीको बाहिरी कपडाको आवरणलाई आधार मानी मुल्याकँन गर्न सञ्चार माध्यमहरु पनि अछुतो रहदैन ।
यो पाखण्डबादले कुनै पनि जातका नारीलाई छोडेका छैनन् । हुन त भन्नेले यस्ता पहिरनका कारण नारीहरू बलात्कृत भैरहेका छन् पनि भन्छन् तर तिनीहरूलाई मेरो प्रश्न ५/६ महिनाको बालिका र ६० वर्ष कटेका वृद्ध हजुरआमाहरु के कारणले बलात्कृत हुन्छन् त ? नारी माथि भएका यस्ता हिंसा न नारीले लगाएको पोशाकले भएको हो न त नारीले आवेशमा ल्याएर भएको हो । यीे खाली नाङ्गे माानसिकता र दरिद्र सोचको कारणले भएका हुन् ।
तर हामी नारीले पनि एउटा कुरालाई पक्कै विचार गर्नु पर्दछ कि हामी नारीले लगाएको पोशाक कसका लागि हो ? आफ्ना लागि या अरूका लागि? यदि आफ्ना लागि लगाएका हौ भने पक्कै पनि यो नारी स्वतन्त्रता हो । जसलाई नारीले यस्ता पोशाक लगाएको मन पर्दैन उसले आँखाबन्द गरेर वा आँखामा पट्टी लगाएर हिँडे हुन्छ । तर यदि कुनै नारी त्यो पोशाक अरूले राम्रो भन्लान् वा अरू कुनै कारणले लागाएको हो भने त्यो नारी स्वतन्त्रता कदापि हुन सक्दैन ।
कुनै पनि महिलाले कुनै व्यापारीको साबुनको व्यापार बढाउनका लागी आफ्नो शरीरको अंग देखाउनुलाई हामीले कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिनु हुँदैन । यसले नारीलाई एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको सट्टा एउटा बस्तुको रूपमा प्रस्तुत गराइदिन्छ । त्यो स्वतन्त्रता हामीले पक्कै खोजेका हौइनौं ।
हामीले खोजेको स्वतन्त्रता र अधिकार भनेको त नारीले लगाएको गाजल नारी स्वयँलाई राम्रो लागेकाले लगाएको हो । अरूले राम्रो भनेका कारणले हैन र हुनु पनि हँुदैन । कुनै पनि नारीको बाहिरी आवरण तथा शारीरिक बनावटका आधारमा सुन्दर र कुरुप भन्न मिल्दैन । नारीको आँखा र स्तनको आकारलाई आधार बनाई सुन्दरताको परिभाषा गर्न मिल्दैन । अब यो सोच र परिभाषा बदल्न जरुरी छ । महिला भनेको सिता जस्तो हुनु पर्दछ भनी नारीलाई रुढिवादी र पिछाडीएको सोचको साङ्लोमा बाँधी राख्ने पाखण्डवादबाट अब नेपाली समाज माथि उठ्नु पर्दछ । नेपाली नारीलाई त्यो समाजबाट माथि उठाइनुपर्दछ ।
कुनै पनि बस्तुको विज्ञापन प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गर्दा महिलालाई कामुक एवं अश्लील तथा बस्तुको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवित्तिलाई रोक्नुपर्दछ । यस्ता विज्ञापनमार्फत नारीको शरीर र निजको पहिरनलार्ई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी समाजमा नारीलाई यौन आकर्षणको बस्तुको रूपमा स्थापित गर्ने गरिएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रियस्तरका केही दैनिक पत्रिकाले छापेको ‘जिंक भोड्का’को विज्ञापनमा निलो चलचित्रको नायिकालाई मोडलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । जसमा महिलालाई अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत् गरी ‘Get Sexy” भनी उल्लेख गरेको लगायतका विभिन्न भ्रामक तथा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका विज्ञापनहरू प्रसारण तथा प्रचारप्रसार गरेको देखिन्छ ।
विज्ञापन गरेको बस्तु र महिलाको अर्धनग्न शरीरको विज्ञापनहरू पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा होर्डिङ्ग बोर्ड लगायत विभिन्न सञ्चार साधनमार्फत प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रदर्शन गर्दा महिलालाई यौन बस्तुको रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ । यस्ता विज्ञापनले किशोर तथा बालबालिकाहरुमा महिलाको शरीरलाई पुरुषले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र गर्न सक्दछ भन्ने नकारात्मक सोचको विकास हुन जान्छ । जसले महिला हिंसालाई अझै बढी प्रश्रय दिन्छ ।
त्यसैले कुनै पनि पहिरन लगाउने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि कुनै बस्तुको विज्ञापनका लागि नारीलाई बस्तुको रूपमा प्रदर्शन गर्नु पक्कै पनि नारी स्वतन्त्रता होइन । त्यसैले महिलालाई मदिरासँग जोडेर तथा कामुक बस्तुको रूपमा प्रचार प्रसार गरी विज्ञापन गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्नुपर्दछ । यस्ता विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डलाई नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिएको छ ।
बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।